विचार: पैसा बाहिर विवाहको लागि एक उपहार
सबै प्रकारका विकल्पहरू बावजुद, पैसा विवाहको लागि सरल, सबैभन्दा सजिलो र "उपयोगी" प्रकारको बनी रहन्छ। अरु सबै कुरा राशिको आकार र प्रस्तावको विधिमा निर्भर गर्दछ: एक परम्परागत लिफा लामो समयसम्म सबैसँग खुवाइएको छ, र अतिथि एक पैसाको लागि पैसा खर्चको लागि आउँदछ। परिणाम "2 मा 1" हो - र बिलहरू दिइएको छ, र अविस्मरणीय भावनाहरू प्राप्त हुन्छन्।
पैसाको विवाहको लागि एक मूल उपहार : मुख्य कुरा यो असामान्य बनाउन हो
कुनै पनि व्यक्ति एक विवाह मा बैंकनोट्स को वितरण को लागि असामान्य विचारहरु संग आ सकते हो। हामी केवल फंतासी, रचनात्मकता (यसलाई अनुमोदन गर्नका लागि) र केहि अवस्थामा अतिरिक्त सामानहरूको उडान चाहिन्छ। र रकम को रकम यति महत्त्वपूर्ण छैन, किनकि यो फारम पेश गरिनेछ। रचनात्मकता, हास्य, सनकीतिकता, प्रासंगिक सन्दर्भ - तपाईले कसरी पैसाबाट उपहार दिने आधारमा राख्न सक्नुहुन्छ। मुख्य कुरा वर्तमान को लागि तयार छ र यो आत्मा र राम्रो मन संग हात छ!
विवाह को पैसा को लागि उपहार: मूल र प्रभावशाली
विवाहको परम्पराहरू पहिले नै नवव्यापीहरूलाई कसरी पैसा दिने भनेर थुप्रै विचारहरू पुनःस्थापित गरिएका छन्। जीवनमा तिनीहरूलाई लागू गर्न गाह्रो छैन, त्यसैले हामी सबै भन्दा रोचक र ज्ञानेन्द्रहरू प्रस्ताव गर्दछौँ।
पैसाको विवाहको लागि मूल उपहार एक पैसाको रूख हो। यो विचार फेंग शुईको शिक्षाका तत्वहरूमा आधारित छ, जसमा पैसाको रूखले अनौठो वित्तीय भइरहेको प्रतीक गर्दछ। यो गर्न को लागी तपाईंलाई एक पतित पौधे, शाखाहरु र पत्तियां जसको सिक्काहरु र बिल जोड दिए को आवश्यकता हो। तपाईं केवल एक बर्तन लिन सक्नुहुन्छ, एक छडी घुसाउनुहोस् र ट्याप प्रयोग गर्न यसलाई संलग्न गर्न को लागी, पेड मुकुटको रूपमा राखेर । यस अवस्थामा, यो राम्रो बैंनोटहरू प्रयोग गर्न राम्रो छ, र त्यसपछि लिफाफेमा साँचो पैसा दिन। काठ समावेश गरेको पैसाको विवाहको लागि अर्को मूल उपहार। उपहार दिँदा तपाईंलाई बत्तीको एक सिक्का "जवान" पोषण गर्न आवश्यक छ। त्यसपछि उहाँले पहिले नै ठूलो पैसाको रूख संग - त्यो पल मा अर्को बर्तन प्रस्तुत गर्न आफ्नो आँखा बन्द गर्न आवश्यक हुनेछ।
यो विचार मूल होइन, तर निश्चित लागि - यो सानो छैन। पैसा कुनै पनि "अनुरक्षण" र मुखबाट बिना दिइएको छ, तर केवल एक अनौपचारिक प्याकेजमा प्रस्तुत गरिएको छ। यो विभिन्न सजावटी बाकसहरू जुन कुनै पनि स्वेच्छा पसलमा फ्री बेचेको हुन सक्छ। यो धेरै मौलिक र असामान्य हुनेछ, यदि तपाइँ यसलाई (वा सट्टामा) सजाय गर्नुहुन्छ भने आफ्नै हातले। यसले यसको लागि एक सानो बाकस लिनेछ (केहि चीजबाट, सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण छ कि यो घना र दोषको बिना), परिष्करण कागज, ग्लू, पारदर्शी स्क्याच टेप। एक डिजाइन र अनन्य काम प्राप्त गर्नुहोस्, यदि बाकसको बाहिरी सतहमा एकमा कोलाज राख्छ।
उत्पत्तिको उपहारको यो संस्करण समात्न छैन। नयाँ छाता लिन आवश्यक छ र आफ्नो प्रवक्तामा बैंकनोटहरू संलग्न गर्न आवश्यक छ। विवाहमा, त्यो मुख्य प्रस्तुतीकरणको रूपमा पेश गरिएको छ, तर तपाईंलाई यो जवानलाई सोध्न आवश्यक छ। जब तिनीहरू गर्छन, तिनीहरू वास्तविक पैसा वर्षा अन्तर्गत हुनेछन्!
बैंकनोटहरू origami को लागि मुख्य सामग्रीको रूपमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। नतिजाको रूपमा, तपाईं विभिन्न किसिमका आंकडाहरू प्राप्त गर्नुहुनेछ - जुन प्रविधि र दाताको इच्छामा निर्भर छ। यो एक हृदय हो र एक तितली पैसा बाहिर, साना पुरुष, जनावर र घर हुन सक्छ। तिनीहरू असामान्य र मौलिक, न केवल वरदानको रूपमा, तर फर्नीचरको सजावटी टुक्राको रूपमा पनि देख्छन्।
दुलही लागि छोएर केप
के विवाह - चार वर्ष सँगै?
पद, गद्य: आफ्नो विवाह वार्षिकोत्सव 15 मा शुभकामना। विवाह क्रिस्टल लागि उपहार
परिवार के हो? परिभाषा: परिवार के हो
मेरी बहिनी श्रीमान्। कसले मलाई त्यो छ?
विवाह लेबल बोतल मा - समकालीन विवाह को एक ब्रान्ड
को billionaires देखि5सुझाव
म chanterelles frying र कसरी यो गर्न अघि जोश गर्नुपर्छ?
बहुमूल्य पत्थर को प्रकार पक्ष: विवरण, सुविधा र समीक्षा
मुख्य कारण: चिसो इन्जिन troit मा
सेल स्पष्ट * बी.आर.: उपचार, पूर्वानुमान
खेल बैग - एक सशक्त गतिविधि कुनै पनि प्रशंसक लागि हुनुपर्छ
अमेरिकी प्यानकेकहरू - सुन्दर मिठो नास्ता
बिजुली बिच्छेदन: यो घरमा कसरी तय गर्ने?
"सम्मान पदार्थ": अभिनेता र दुई फरक श्रृंखला को भूमिकाको
पिज्जामा पिज्जा। नुस्खा सरल छ, स्वाद उत्कृष्ट छ
वर्ण कसरी सिक्न? कति चाँडो चिनियाँ वर्ण सिक्न?
कसरी केही मिनेट लागि rectifier प्रयोग कर्ल गर्न?